Kombiyuutar Kharash Yar
Kombiyuutar qiime jaban
in uun ka badan
Kombuyuutarka Dell ee qiima-hooseeya
Is la markaad noqoto macmiilka Internet Essentials waxaa khiyaar u leedahay inaad ku gadato labtop-ka Dell oo cusub ama Chromebook kaliya $149.99 + canshuur Haddii aad xiiseyneyso, raac talaabooyinka fudud ee hoose.
Codsiga Internet Essentials waa mid sahlan oo fudud. Haddii aadan hore u sameynin codsiga, soo guuji badhanka 'Hadda Soo Codso' ee hoose si aad u bilowdo.
Waxaa dhici karta in markiiba laguu ansixiyo!
Haddii aad jeceshahay inaad kombuyuutar gadato, waxaad dalabkaaga dhigi kartaa onlaynka. Hoos, waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan kombiyuutarada la iibsan karo. Markaad dalabkaaga u gudbiso mid kamida wadaaga-yaashada la ansaxiyay, waxaad oggolaatay in Comcast xogtaada la wadaagi karto wadaagaha-yaga si ay u hubiyaan inaad tahay macmiilka Internet Essentials Xogtaan waxaa ku jira magacaaga, lambarka taleefanka, cinwaanka iimaylka, lambarka xisaabta bangiga, xaaladda codsiga, iyo tirada kombuyuutarrada aad hore u iibsatay.
Faah-faahinta qalabka ugu yar ee ku jiro kombiyuutarka
Kaydinta Xogta (RAM)
"Waa lagu daray"
1 Boostada Sannadka ee Adeegga
Dukaanka Dheesha Google/Xaashiyaha Google
Hadda Soo Codso
Kombuyuutarradu waa cusub yihiin waxayna ku xiran yihiin inta diyaarsan ee la heli karol Dhammaan kombiyuutarada waxay qabaan qalabyada loo baahan yahay sidii si toos ah loo isticmaalo markii laga soo baxsho sanduuqa si aad ugu raaxeysato internetka guriga.
Soo Iibso Kombuyuutar Qarash-Hooseeya
Qaybta soo dhaweynta
Inta Badan La is Weyddiiyay
Kaalmo ka timd Dhanka Xfinity
Hubi Xaaladda Codsiga
Xaaladda Codsiga Sooyaal-Qofeedka Kaydsan
Ku xaree Dukumintiyada Arjiga
Xaashiyaha loogu baahan yahay U-Qalmashada
Badbaadada Onleenka iyo Amniga
dhisitaanka Xirfado Cusub
Goob Ilo Aageed
Barnaamijka Wadaagga IEPP
Shuruudaha iyo Nidaamka
Siyaasadda Gaar Ahaanshaha
Ha Iibin Xog Qofeedkaygu